I-Sony Xperia Z: ukubuyekezwa. I-Sony Xperia Z - ifoni. I-smartphone ye-Sony Xperia Z
Ngo-2007 i-iPhone kuqala yethulwa kusukela Apple, futhi cishe bonke labo ngesikhathi izivakashi inkomfa abakhona kwasihlaba umxhwele ngobukhulu isikrini sayo. Namuhla isikrini 6,44 amayintshi nge isinqumo 1080 p, ayivamile ukubangela Izibuyekezo rave ngempela. Sony Xperia Z kule ndaba kuyinto ngaphandle sihle, njengokuba abathengi ezingaba baye baqaphela ngokushesha.
Ngisho abasebenzisi abangekho kakhulu uyakuthanda Smartphones omkhulu, ngesithakazelo esikhulu wabheka isethulo sakhe sokuqala. Manje sibheka ukubuyekeza amakhasimende futhi azame ukwenza ezinye iziphetho mayelana nekhwalithi le gajethi emangalisayo.
Vele uqaphele ukuthi "mfowethu big" phambi kwethu amadivayisi, Sony Xperia Z Ultra, analo ingxenye zonke izici eziningi efanayo, ukuze isihloko ingasetshenziswa obengekho ajwayelane imodeli iwuhlelo. Yiqiniso, kuba izinga ngcono kakhulu ezicini ezithile, kodwa namanje izici eziyinhloko cishe akukho ushintsho.
Lokho uqonde isisekelo okwakhelwe kuso abathengi baye saveza umbono ethile, kungaba kuhle ukuba bajwayelane nezici eziyisisekelo "iqhawe" yethu. Nampa:
Kuphethwe igajethi yokusebenza mobile uhlelo Android 4.2.2.
Isikrini nge 6,44 intshi idayagonali futhi isinqumo 1920 x 1080.
Engemuva ukukhwezwa ikhamera omkhulu 8 MP Exmor RS, kodwa flash ngasizathu simbe developers wakhetha ukungahlukanisi.
"Inhliziyo" zedivayisi 800 kuyinto Qualcomm Snapdragon processor clocked at 2.2 GHz.
Lubhekele video processing core Adreno 330.
On the "ebhodini" has 2 GB we-RAM.
Esakhelwe ngaphakathi inkumbulo - 16 GB, ngaphezu kukhona slot for micro-SD.
Idatha ukuwudlulisa reception interface: NFC, GPS, i-OTG USB, i-Wi-Fi, i-Bluetooth.
I umthamo webhethri 3000 mah ibhetri.
Ubukhulu Kudivayisi: 179,4 x 92,2 x 6.5 mm.
ephaketheni intando yakho umthwalo ilungelo 212
Yini ebangela lokhu ubukhazikhazi Izibuyekezo? I-Xperia sony Z ngokushesha wathandana amakhasimende ukugcwaliswa enamandla, yesimanje (ngesikhathi) "i-Android" version, kanye ngamandla isikhombimsebenzisi sokuqhafaza. Njengoba Bathi abasebenzisi 'ebona, ngokuvamile ngesikhathi igobolondo i-Android ngonjiniyela' nensimbi ', kanye kukhona isifiso ukuyisusa. Kodwa angeke kwenzeke lokho namhlanje: konke ngokucophelela ngangokunokwenzeka futhi qualitatively, esibonakalayo akuyona "lag", izithombe iyashesha futhi iyashelela.
Kule ndaba, Sony Xperia Z, izimfanelo esesiye sacabangela, ngezinye izikhathi uyakwazi ukunikeza lobo bunzima izimbangi abadumile kakhulu. Kunoma ikuphi, inethiwekhi akunjalo ezingavamile ukuthola izibuyekezo mayelana nendlela udlulela ngayo Apple imikhiqizo. Abasebenzisi bakhangwa platform sokuqala evulekile, okuyinto eyenza ukuxhumana ngempumelelo ngaphezulu nedivaysi.
Okunye umehluko kusuka izimbangi
Okwamanje, le imodeli iyona enkulu kunazo zonke futhi omkhulu kakhulu Full HD-smartphone emhlabeni. Uma kuqhathaniswa, i-iPhone 5 lingaphansi kuka mayelana 2.5 izikhathi. Nokho, cishe ingeqi usayizi Samsung Galaxy Mega. Lesi sakamuva kubalulekile, njengoba nokwandisa isibonisi usayizi abasebenzisi uzolahlekelwa unaphakade ikhono lokusebenzisa idivayisi njengocingo angiwufuni ngesikhathi esifanayo umsebenzi wetende esekisini.
Kufanele kuqashelwe ukuthi abakhiqizi ngokuvamile ihlanganisa uhlobo ubuchwepheshe ingxenye maphakathi no-Intengo: i- "lokwela 'elifanayo Samsung has a ukugcwaliswa sibi (uma iqhathaniswa), kodwa umi uhla ruble ayizigidi 15. Sony, owaziwa ngokuba ukuphelela kwakhe, ngakho wayengakwazi ukwenza. Xperia Z - iyinhlangano smartphone omkhulu, ephelele ne best izixazululo umakhi, kanye kokuba isivikelo ngokuqinile namaqhinga uthuli futhi umswakama.
Yini usho Izibuyekezo? Sony Xperia Z kusolakala ikhasimende akasabeli umswakama oqinile egumbini. Yiqiniso, i-sauna naye kangcono hhayi ukuhamba, kodwa lokho kulula ethela juice noma amanzi (ngibukele opopayi nomntanakhe) ehlupheka ngaphandle kwezinkinga.
Ngaphezu kwalokho, experimenters yenza ngokuphelelwa yithemba libike ukuthi ifoni Sony Xperia Z kungenziwa egxilile a imitha elilodwa ukujula for isigamu sehora! Nokho, ngenxa ukuvikelwa umswakama smartphone has nesembozo eziningi. Njengoba abathengi qaphelani, ngenxa izingqimba ezihlukahlukene izinto zokuzivikela ku Dynamics lokhu smartphone a ingezwakali ambalwa, + ukuze kuthi lapho ukubukela amabhayisikobho ngaphandle-earphone kumele uzwakale isethelwe seqiwe. Nokho, izinga ke ezingeni ukuphakama ukuze ukulahlekelwa okusheshayo umthombo microphone hhayi ezisengozini.
Kepha uthuli, izimo ke ezinjalo namanje kufanele kugwenywe, njengoba bagcina yonke izimbotshana. Abasebenzisi bathi Pick yayo laphaya Liyindawo nzima. Nokho, unikezwa imodeli kakhulu lesi sigaba yamanzi-ubufakazi, ungakwazi umane ukususa ngaphansi Emanti. Yiqiniso, bezihlikihla ngayo ibhulashi esintamo ngokusobala aliwona ukuba, kodwa yokuhlanza olunembile ngendwangu elithambile asiphethe okukhulu.
liyigugu kakhulu lesi sici kulabo ukungatholi ahlukane smartphone wabo ngisho ngeholide lolwandle ehlobo. Okubalulekile! Naphezu Ubulula nokusebenziseka ukugeza, ungathathi smartphone ukuphumula, isibonisi is hhayi anamatheliswe ifilimu zokuzivikela. Izibuyekezo abonisa ukuthi isikrini oluphakeme lula ekuqaleni, futhi isihlabathi kuphela alinganayo imishini umonakalo Ngeke neze!
Ukuba ezinhle (kodwa hhayi elele) ukugcwaliswa, idivayisi kwenza cishe 29.000 amabhola ku AnTuTu lokuma! Ngesikhathi uya ukuzuza console kuphela Nvidia Isihlangu, okuyinto ekuqaleni "ngensimbi" umdlalo elinamandla, futhi ngenxa yalokho kwaba ifakwe chip Tegra 4. Izibuyekezo abadlala zisikisela ukuthi izimfashini zamuva zemidlalo Sony Xperia smartphone Z "digests" kakhulu. Ayikho amabhuleki noma zilimaze (ngisho ukukhanya) ngeke ukuthole naphakade.
Kodwa uma ukholelwa ukuthi Ukubukeza kwethu Sony Xperia Z siqukethe kuphela wokuchaza uyabaqinisa smartphone, uku okungalungile. Njenganoma yimuphi ubuchwepheshe isampula, le gajethi has nezihibe. Lutho sina, bengakwenzi, kodwa namanje amanye amaphuzu kufanele kuqashelwe.
Sesiphawulile ukuthi ukugqashuka egumbini lendawo akuyona. Kakhulu, kakhulu cha. Ukuze ukuthi yenzeni, abathengi kanye abakhangisi ezitolo hhayi kakhulu ukuqonda, kodwa zisikisela ukuthi inkampani ngalesi sinyathelo ongaziwa akahambe ngenxa yokuthuthukisa kunokuncintisana iwuhlelo Z Ultra. Iqiniso liwukuthi phambi kwethu ikhophi has cishe izici ezifanayo njengoba umfowethu yayo enkulu. Nazi nje Sony Xperia Z, ogama intengo imayelana 20,000, awunankinga yokwenze indima "isilinganiso umuntu" ifoni, kanti izindleko esemthethweni amamodeli amadala - kusukela ama-ruble ayizigidi ezingu-30.
Kafushane, abakhangisi umkhiqizi wazama enkazimulweni! amakhasimende Abaningi bayavuma ukuthi kungakhathaliseki ukuthi ikhamera kokugqashuka ngeshwa kakhulu, ngokuqinisekile kwakungeke kudingeke ukuchitha imali umfuziselo lesizukulwane esidala, wakhetha "mfowethu omncane".
Nokho, abasebenzisi uqobo lwabo bobabili amadivayisi ukuqaphela ukuthi ikhamera akanayo amakhono okungavamile, ngokudubula cishe ezingeni iPhone 4S ubudala. Kodwa-engeli wokubuka isibonisi sika zinhle kakhulu, kodwa ikhwalithi yesithombe - eliphezulu kakhulu. Izithombe Bhayibheli ucacile futhi okukhulu ukuthi kule ndaba smartphone Sony Xperia Z Bypasses zonke izimbangi zayo.
Ephetha Ukubuyekeza ngamaphutha, kufanele kuphawulwe elinye Iqiniso elibuhlungu. Iqiniso lokuthi cishe zonke abathandi bomculo, abaye asebenzelana ngayo kule foni, okhalazayo ngelungiselelo lateral of umgodi we-earphone. Ngenxa yobukhulu enkulu, zingabantu ungakhululekile kakhulu ukusebenzisa: isimangaliso nge kwelivi lateral hhayi sinezele ku ibhulukwe lakhe ephaketheni, futhi ikhava ekusebenziseni ifoni okuvamile ngeke aphumelele.
Izibuyekezo ukusuka amakhosi service izikhungo
Uma kancane ulandele izimfashini zamuva zobuchwepheshe emakethe, wazi ukuthi umzimba cishe wonke Smartphones yesimanje, amaphilisi kanye namanye amadivayisi ziboshelwe latches. Ngakho, ngesineke ukuphathwa kabi futhi ucishe isandla oqondile ingakhishwa zezikhali yokuhlanza kanye nokugcinwa elula.
Nge kule foni lesi senzo ngeke zisebenze. Iqiniso lokuthi zonke izingxenye abatshalwé hot ncibilikisa Yesigcilikisha. Ngakho ukuhlangana futhi kwazo kubalulekile ukusebenzisa nokunamathisela ngomthofu esiteshini ekhethekile, okuyinto izindlu kwakungadingekile ukuthi izingcweti ngabanye. Uma ungenayo isipiliyoni yezenzo ezinjalo, it is kakhulu Kunconywa hhayi ukwenza kubo, ekusebenziseni le foni: njalo okuthile ngobugebengu kuwo.
Cishe kuzo zonke izingxenye yangaphakathi zitshalwa glue, ngakho-ke sincoma ukugwema "uthuthumele" okungazelelwe musa batusa bephonsa smart phone ezindaweni okunzima. Ngaphandle ingozi zokugwema ukuphuka isibonisi, ke cishe nakanjani kuyoholela umonakalo kanye nezinye izingxenye, okuyinto umane naphula kude besezihlalweni zabo. Yiqiniso, kunyakaze lutho elula efana lokhu kuzokwenzeka, kodwa namanje ukuwazi tesakhiwo uyisidingo.
Yini engalungile ama-movie?
Omunye umbuzo uhlupha bonke abalandeli ukubukela amabhayisikobho efonini yakho. Inkampani Sony! Kwenzeka kanjani ukuba wena, ngokuba "trendsetter" emhlabeni movie, ngeke ukwazi isofthiwe indinganiso yamavidiyo omnivorous ngaphezulu? Esikhathini sethu, lapho amafayela MKV ngokuphelele ukukhiqiza kabusha cishe zonke izindlela zakamuva ngisho TV ezishibhile, uma uzama ukubheka kubo ocingweni basuke wadlala wawungezwakali umsindo wezwi lakhe! Yiqiniso, ungakwazi abeke yisiphi isidlali uthanda, kodwa engenangqondo ka isimo ephambanisa abasebenzisi eziningi.
Ngokuqondene FullHD isinqumo ke okungenani akunankinga kule ndaba. Abanye abathengi akhononde Izilawuli engavamile ambalwa umdlali wendawo, kodwa udinga nje ukujwayela lezi zici.
Ungakhohlwa mayelana isikhwama!
Yebo, esinye sazo ukumangala, kodwa akukho ebaluleke kancane. Iqiniso lokuthi ukuboniswa kwefoni, nakuba, futhi ivikelwe enamathela ezinhle, kodwa ngaphandle okwenele kungavela esimweni ngokuphelele indigestible kuphela kwenyanga noma ezimbili. Amalungu ukuncoma Krusell. Kubiza ruble cishe izinkulungwane nengxenye. Ayanda (kuqhathaniswa nesincintisana) Inani incephezeliswa yokuthi beye esakhelwe okuyinto kakhulu kuthuthukisa smartphone ukusetshenziswa movies.
Yini abantu bathini mayelana esiteshini docking?
Kufaka ngedivayisi kuqhathaniswa ezinhle Sony Xperia Z. dock Lesi simo esihle nje ziqondakala abasebenzisi njengoba usebenzisa lezi "amagajethi" smartphone kungenziwa liphenduke ithuluzi ucishe sina lo msebenzi ukuthi kufanelekile hhayi kuphela zokubhala imibono zokuxhumana nabantu .
Ngokwesibonelo, ngomsebenzi kungaba zinqwabelane ngisho umbiko. Akukhona ukhululekile kakhulu, kodwa noma kunjalo doable kakhulu. Ngaphezu kwalokho, amakhasimende bayaliqonda iqiniso lokuthi ngemva kokuthenga umkhiqizo, banayo igajethi ezandleni, okuyinto cishe i-tablet agcwele. Okubalulekile! abathengi abaningi bathi plugs, okuyinto lihambisana ukuvikela zonke nezixhumi zobuchwepheshe, hhayi eliqinile. Le foni Sony Xperia Z unpleasantly simangaze abaningi abalandeli bakhe.
Ikakhulukazi uya isixhumi wayeqamba. Uma kungakapheli nengxenye yonyaka njalo ukudonsa plug ayo, kungavela okuxekethile kakhulu, uma angawi. Lapho engcono yokusebenzisa idokhu yokushaja: kwanele ukususa i-tablet futhi smartphone isethi on a yesikhulumi eyenzelwe kuye. Ngokushesha uqale inqubo ukushaja, futhi akudingeki ukuba stub mbumbulu.
Ikhwalithi yesithombe, oveza isikrini Sony Xperia Z, emangalisayo, kodwa ingxenye kwesikrini "odla" control panel izinkinobho. By endleleni ekhuluma, u-Sony - omunye izinkampani ngowokuqala lidlule ngokugcwele izinkinobho ebonakalayo. Kwezinye izimo, akuyona elula ngakho, njengoba i-display ukusebenza kubalulekile ukusebenzisa inkinobho ohlangothini, futhi kwezinye izimo ukuze uwufinyelele kusukela okokuqala ngokusobala ngeke zisebenze.
Nokho, cabangela leli njengoba iphutha elibi kakhulu, singathanda azikakwazi: ukusebenzisa ifoni ku amaphoyisa yomgwaqo lutusa, kodwa kwezinye izimo kungenzeka ukuthola imizuzwana embalwa esengeziwe ukumisa bese ucindezela inkinobho efanayo ill-fated.
Isikrini senziwa izinga okusezingeni eliphezulu kakhulu, futhi umphumela waba ukuthi abasebenzisi babika lihle umbala ukukhiqizwa kabusha. Njengoba umklami usebenzisa i-matrix ezinhle ngempela, empeleni ngisho umbala omnyama libukeka enjalo (nakuba abathengi abukhali namanje uqaphele ezinye lemicu empunga elinamathela othini). Yiqiniso, ikhwalithi ukukhanyisa enhle, akukho ecasulayo ukukhanya izindawo ezisemagumbini is hhayi waphawula.
Fans of zesimanje walithanda ibhodi futhi lokuthi isibonisi sakhe esihle futhi ukubonisa amakhasi ewebhu, namabhayisikobho, imidlalo ashukumisayo sihle. Maye, isiqhebezo magnetic owawuzoba kwaqina isibonisi ekuvulweni ikhava ekhethekile, kungekho ikhava. Nokho, cishe bonke abasebenzisi abangaphansi kwalesi Eqinisweni ngomoya ophansi, ngaphandle ukuntula kwayo ithebhulethi Sony Xperia Z. umkhiqizi isilinganiso (efanayo Samsung) lokhu kungenzeka akulona, kodwa ngenxa abasebenzisi bethu ukuthi kungukuthi spoilt.
amamojuli Wireless futhi GSM
Uma une-router uyakwazi ukusebenza imvamisa ka-5 GHz, singajabula! Ifoni isekela leli banga, ukuze ukwazi ukugwema ukuphazamisana e emafulethini lapho iphuzu engenantambo has cishe wonke umuntu. Ngaphezu kwalokho, abasebenzisi babike umxhwele "ukuphikelela" module kule imodeli: ifoni ucishe ngokuqiniseka Ubamba inethiwekhi ngisho ezisemagumbini ezikude kakhulu efulethini noma indlu.
Ngokuqondene zokuxhumana eselula ezivamile, akukho imiphumela oluvelele ikakhulukazi akukho okungcono, kodwa akukho okubi kakhulu ukwedlula izimbangi. Indlela ejwayelekile yokuziphatha kumanethiwekhi entsha Sony Xperia Z? LTE-inethiwekhi (sisenalo kancane kakhulu) ukusebenza obuhle naye. Nge-SIM khadi ezikweletini kwanoma yimuphi umqhubi yasekhaya friendly kungabikho izinkinga. Noma kunjalo, abanye Izibuyekezo omubi leli phuzu. Noma kunjalo, abasebenzisi abaningi bakholelwa ukuthi Sony Xperia Z Ultra ikuvumela ukudlulisa idatha ngesilinganiso ngokushesha.
Nquma ukuthi ngenxa kokuchitha extra ruble ayizigidi 10 - engathí zomuntu siqu.
A kancane mayelana nezinye amazinga zokuxhumana ezingenazo izintambo
Njengoba siye kakade kuveziwe ezibekiweko, kukhona ukusekela NFC newfangled. Kuze kube muva nje, le ndlela kuyinto engenamsebenzi, kodwa abanikazi yokugcina yosuku iphrinta smartografa LG futhi Sony DSC-QX10 abonisa ukuthi smartphone ukusebenza nabo baqala ngaso leso sikhathi, ngaphandle ukwehluleka. Ngaphezu kwalokho, ukudayiswa zingatholakala-headphone engenantambo NFC, eziningi kangaka abathandi bomculo niyakhuluma ngalokhu umsebenzi ngenhlonipho.
Entsha Sony Xperia Z 2 , le ndlela iye kwalondolozwa njengemiBhalo isikhathi ngenxa yokuthi abasebenzisi kubhekwe ziwusizo kakhulu. Ikakhulukazi, wenkampani esikhulume ngayo ukuthi abathengi Ubhale ngokuphindaphindiwe ngezinzuzo le ndinganiso ifomu impendulo.
Njengoba ubukhulu kudivayisi uma isetshenziswa njengophawu ifoni inika uhlobo umsebenzisi we ngempela kuwubuwula, kungcono uthole-earphone. Abathengi futhi wazi ukuthi smartphone kahle azibandakanya "" cishe wonke izibonelo ekhona iwashi "smart", ukuze ukwazi ukuthenga nokuqina ngisho kubo.
Kancane mayelana nomklamo
Njengoba for the design, lapha Sony usephendukele ngendlela yalo. Sikhuluma inkinobho yayo nokuphathelene abaningi abayithandi. Nokho, ingxenye enkulu abasebenzisi namanje lithi kumjabulisa kakhulu touch, futhi ulisebenzise elula kakhulu. onjiniyela Inkampani ongakuqonda lokhu ibha isakhiwo esincane eminyakeni usujwayelene kubasebenzisi ukuze vele uye futhi ayibulale ngeke zisebenze.
Yini okushiwo yizibuyekezo? I-Sony Xperia Z - ikhethelo elihle kakhulu kusigaba samanani. Ifoni ikhululekile kakhulu ukuyisebenzisa, izinto zokwahlulela zivusa ukuzwa okuthandekayo. Uma uhlale ufuna ukuthola igajethi ezohlanganisa izimfanelo ze-smartphone nethebhulethi, ngakho-ke akukho lutho olungcono ukuthola luvele luhluleke.
Ake sihlanganise ...
Ngedivayisi i-Xperia Z nakanjani ayifuni ukuhamba. Ngandlela-thile ephansi kunamathebulethi ane-diagonal yokubonisa ama-intshi angu-7, ngesikhathi esifanayo wenza yonke imisebenzi ejwayelekile kumafoni avamile. Uma unayo i-TV esekela umsebenzi ohambelana nawo, ungahambisa amavidiyo nezithombe kusuka ku-Sony smartphone yakho. Ngamafuphi, le divayisi imnandi futhi inqunywe kahle.
Umkhiqizi uthembisa ukuthi ukuvuselelwa kwe-Sony Xperia Z kuzokwenziwa okungenani unyaka nonyaka, ngakho-ke ngisho nabalandeli be-"Android" yakamuva bangathatha isikhathi sabo ngokushintshela kumodeli omusha. Uma udinga okuthile okunamandla, ke sincoma ukuthi ubheke imodeli ngesibalo se-Ultra. Abasebenzisi bafakazela ukuthi amakhono ayo anele ukubuyisela ngokugcwele ithebhulethi ejwayelekile yamasentimitha ayisikhombisa.
Indlela esiphatha ngayo endlebeni amakhambi ekhaya abantu
A reinstallation okulula Windows XP
Ukufa zalesi sihlahla, noma Kungani amahlamvu Cyclamen phuzi?